शनिबार एकसाथ त्यति महत्वपूर्ण के काम भए ओखलढुंगामा ? – Sagarmatha Online News Portal
११ जोर चप्पल बगाउने खोलामा पुल !
ओखलढुंगा । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापनाको अवसरमा ओखलढुंगामा दुई महत्वपूर्ण दुई काम भए । दुवै महत्वपूर्ण काममा सांसद यज्ञराज सुनुवार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु सहभागी भए । एक, ओखलढुंगा रुम्जाटार सडक खण्डको सिस्ने खोला पुल शीलान्याश र ३५ वडालाई पुनःनिर्माण सम्पन्न वडा घोषणा । दुवै कार्यक्रमको नेतृत्व संघीय प्रतिनिधी सभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले गरे ।
विहान पुल शीलान्याश गरेर दिउसो पुनःनिर्माणका चार वर्ष नामक पुस्तिका विमोचन तथा ३५ वडालाई पुनः निर्माण सम्पन्न वडा घोषणा र वडाहरुलाई सम्मान भव्य रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भए ।
२६.२ मिटर लामो ६ मिटर चौडा रहने पुल गौरी पार्वती, अर्याल ब्रदर्स ले ठेक्का लिएको हो । ३ करोड १५ लाख बढी लगात रहेको उक्त पुल ५ सय ४० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । शिलान्याश कार्यक्रममा ठेकेदार श्याम अर्यालले तोकिएकै मितिमा काम सक्ने बताएका छन् । पुल शिलन्याश पछि उक्त खोलाले आफु हिड्दा ११ जोर चप्पल बगाएको स्मरण गर्दै रुम्जाटार माविका प्रधानाध्यापक गोकर्ण बानियाँले खुसी व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ –भवन, जिमाली र शिक्षा) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओखलढुंगाका ७५ मध्ये ३५ वडालाई पुनः निर्माण सम्पन्न वडा घोषणा गरिएको हो । प्राधिकरण स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार ९० भन्दा बढी व्यक्तिगत आवाश पुनः निर्माणको काम सक्ने वडालाई पुनः निर्माण सम्पन्न वडा घोषणा गरिएको छ ।
प्राधिकरणको जिल्लास्थित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले शनिबार ओखलढुंगामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद यज्ञराज सुनुवारले पुनः निर्माण सम्पन्न वडा घोषणा गरे । उनले पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्दा ०७२ सालको कहालीलाग्दो विपद्लाई विर्सन नहुने बताए । आवाश पुनः निर्माण सकेर नागरिकलाई सुरक्षित बासको सुनिश्चित गर्न सफल भएकोमा वडा अध्यक्ष र खटिएका प्राविधिकहरुलाई धन्यावाद दिदै ९० प्रतिशत बढी काम पुरा गरेका वडाहरुलाई सम्मान पनि गरे । २०७२ सालको भुकम्पका कारण जिल्लाका ८ स्थानीय तहका ७५ वडामा २१ हजार ३ सय ७७ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । तीमध्ये सबै वडाको औषतमा ८७ प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भैसकेको छ ।
सरकारको ९० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिगत आवाश पुनःनिर्माण सक्ने वडालाई सम्मान गर्ने नीति अनुसार ओखलढुंगाका ३५ वटा वडालाई पुनःनिर्माण सम्पन्न वडा घोषणा गरिएको हो । जिल्लामा ब्यक्तिगत आवास तर्फ ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका वडालाई सम्मान गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला अयोजना कार्यन्वय इकाई (अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) का अयोजना प्रमुख युवाराज खरेलले बताए ।
वडामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले भूकम्प पीडितको समस्या र प्राधिकरणको नियमका बीचमा सहजीकरण गरेर पुनः निर्माण सम्पन्न गर्न आफ्नो वडा सफल भएको सिद्धिचरण नगरपालिका, वडा नं. ६ का अध्यक्ष मदन मगरले बताए । ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लिखु गाउँपालिका ६ का दुई जना प्राविधिकलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
लाभग्राही छनोट देखी भुक्तानी नलिँदासम्म निरन्तर सहजीकरण गरेको वडा अध्यक्ष र प्राविधिक बताउँछन् । निर्वाचनपछि गाउँको पुनःनिर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकाले सफलता मिलेको मोलुङ गाउँपालिका– ७ पात्लेका वडा अध्यक्ष हेमबहादुर सुनुवारले बताए ।
पुनः निर्माण सम्पन्न गरिएका वडामा अब घर सम्पन्न प्रमाण पत्र वितरण र केही घरमा अन्तिम किस्ता अनुदान भूक्तानीको काम मात्रै बाँकी छन् । धमाधम यस्ता काम सकेर पूर्ण रुपमा पुनः निर्माण सम्पन्न जिल्ला बनाइने आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । यसरी पुनः निर्माण सम्पन्न गर्ने सिद्धिचरण नगरपालिकाको ६, मानेभज्यङ गाउँपालिकाको २, मोलुङको १, ५, ६ र ७ नम्बर वडा रहेका छन् ।
लिखु गाउँपालिकाको ३, ४, ५, ६, ७, ८, र ९ नं. वडा, सुनकोशीको २, ३, ४, ८, ९ वडा र खिजिदेम्बाको २, ४, ५, ६, ७, ८, र नं. वडाले पिुनः निर्माण सकेका छन् । त्यस्तै ९ चम्वादेबी गाउँपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र चिशंखुगढीको ४ र ५ नम्बर वडामा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य वडामा पनि ८७ प्रतिशत बढी काम भएका छन् ।
ओखलढुंगामा १४ सरकारी भवन २१ हजार बढी व्यक्तिगत घर र विद्यालयका ८ सय १० कक्षाकोठा भत्किएका थिए । अहिले विद्यालयका भवनहरु पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ । हालसम्म पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणले ५ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैंया खर्चिएको तथ्यांक छ ।